Rugby malagasy : hosaziana izay tsy ara-dalàna | NewsMada
Rugby malagasy : hosaziana izay tsy ara-dalàna
Nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Rugby malagasy, tamin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, fa tsy maintsy manana Elite 1 sy Elite 2 ary ekipa fiandry na D2 sy D3, miampy ekipa “relève” miaraka amin’ny mpandimby sy sekolin’ny Rugby ary ekipa vehivavy, ny fileovana tsirairay, manomboka amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Ankoatra izay, tokony hiavaka ny ekipa milalao «rugby à VII» sy ny «rugby à XV ». Tsy vita vetivety anefa izany fa alefa miandalana.
Ireo rehetra ireo, ny fepetra takian’ny World Rugby, hamadihana ny ekipa ho lasa klioba. Hamoahana klioba tena matanjaka ny tena tanjona ary hisorohana ny fisian’ny ekipa mitsangana etsy sy eroa, nefa tsy maharitra an-taonany akory.
Ho fampahafantarana ny mombamomba ireo, hisy fiantsoana ireo filohana klioba rehetra eto Antananarivo, ny asabotsy ho avy izao, etsy amin’ny LTC Ampefiloha. Hisy ny sazy henjana ho an’izay tsy manaraka izany.
Hotontosana, amin’ity koa ireo fifidianana samihafa. Hisantatra, izany ny an’ny klioba, hatao ny volana avrily. Ny faran’ny volana mey ny an’ny seksiona sy ny an’ny ligy ary hamarana azy ny an’ny Rugby malagasy, ny voalohan’ny volana jolay. Hanaraka ny fepetra toy ny amin’ny fifidianana eo anivon’ny World Rugby sy ny Afrika Rugby izany, toy ny fifidianana savaranonando, hifantenana izay tena hifaninana farany. Hisy koa fitakiana diplaôma amin’ireo mpilatsaka.